ဗိုင်းရပ်စ် နှစ်ခု ကို တိုက်ဖျက်နေ ရတဲ့ ဘရာဇီး နိုင့်ငံအကြီးအကဲ ရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှု အလွဲ များကြောင့် ကိုဗစ် ကို အရှုံးပေးလိုက်ရ – Let Pan Daily
ဘရာဇီး တွင် ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် နေ့စဉ် သေဆုံးမှုနှုန်း စံချိန် တင် ခဲ့ပြီး သေဆုံးသူ စုစုပေါင်း (၂၀၀၀၀) ကျော်လာ တတိယ အများဆုံး အကူးစက်ခံရတဲ့ နိုင်ငံဖြစ် နေပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ် နှစ်ခုကို တိုက်ဖျက်နေရတဲ့ ဘရာဇီး နိုင့်ငံအကြီးအကဲ ရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှု အလွဲများကြောင့် ကိုဗစ်ကို အရှုံးပေးလိုက်ရ ဘရာဇီး တွင် ပြီးခဲ့သော ၂၄ နာရီ အတွင်း ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံး သူ စံချိန်တင်ခဲ့ပြီး နောက် မေ ၂၁ တွင် ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူ စုစုပေါင်း ၂၀၀၀၀ ကို ကျော်လွန်သွား ခဲ့ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဌာန က ထုတ် ပြန်ခဲ့ ပါ တယ် ။
ဗိုင်းရပ်စ် နှစ်ခုကို တိုက်ဖျက်နေ ရတဲ့ ဘရာဇီး နိုင့်ငံအကြီးအကဲ ရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှု အလွဲများကြောင့် ကိုဗစ်ကို အရှုံးပေးလိုက်ရ လက်တင် အမေရိကဒေသ တွင် ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု အဆိုးရွား ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေသော ဘရာဇီး၌ တစ်ရက်တည်း ၁၁၈၈ ဦး သေဆုံး ခဲ့ပြီး သေဆုံးသူစုစုပေါင်း ၂၀၀၄၇ ဦး အထိ မြင့်တက်လာခဲ့ ပါတယ် ။ လက်ရှိ အချိန်ထိ သေဆုံးသူပေါင်း ၂၀,၂၆၇ ဦး ရှိပြီ ဖြစ် ပါတယ်။
ဘရာဇီး တွင် ယခုအခါ ဗိုင်းရပ်စ်ကူး စက်ခံရသူ အရေအတွက်သည် ၃၁၀၀၀၀ ကျော်ရှိ လာနေပြီး ရောဂါ စစ်ဆေးမှု အား နည်းခြင်းကြောင့် အမှန်တကယ်အရေအတွက် သည် ယင်းထက် ပိုမိုများပြားနိုင်ခြေရှိကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူများ က ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ် နှစ်ခုကို တိုက်ဖျက်နေရတဲ့ ဘရာဇီး နိုင့်ငံအကြီးအကဲ ရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှု အလွဲများကြောင့် ကိုဗစ်ကို အရှုံးပေးလိုက်ရ ကူးစက်မှုနှင့် သေဆုံးမှုနှုန်း တစ်ရှိန်ထိုး မြင့်တက်နေမှုကြောင့် လူဦးရေသန်း ၂၁၀ ရှိ ဘရာဇီးသည် အမေရိကန်နှင့် ရုရှားပြီးလျှင် တတိယအများဆုံး အကူး စက်ခံရတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်နေ ပါတယ် ။ ကမ္ဘာ မှာ သေဆုံးမှု ဆဋ္ဌမမြောက် အမြင့်မားဆုံးဖြစ်နေတဲ့ ဘရာဇီး၌ ၁၁ ရက်အတွင်း နှစ်ဆ တိုးခဲ့ကြောင်းလည်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဗိုင်းရပ်စ် နှစ်ခုကို တိုက်ဖျက်နေ ရတဲ့ ဘရာဇီး နိုင့်ငံအကြီးအကဲ ရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှု အလွဲများကြောင့် ကိုဗစ်ကို အရှုံးပေးလိုက်ရ
ရောဂါ ကူးစက်မှုနှုန်းများ သည် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ ပျံ့နှံ့နေသော်လည်း လက်ယာစွန်းဝါဒီ သမ္မတ ဘော်ဆွန်နာရိုက အလွန်ကျဆင်းနေသော စီးပွားရေးကို ပြန်လည်အားကောင်းစေရန် အတွက် လော့ဒေါင်းပြုလုပ်ထားခြင်းကို ဖယ်ရှားပေးဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ ဘရာဇီးမှာ မတ်လကုန် ကတည်းက လော့ဒေါင်းတွေ ချမှတ်ထားတာ ဖြစ်ပြီး ဘရာဇီး ပြည်သူများအနေ နဲ့ စိတ်ပျက်နေကြပြီဖြစ်သော်လည်း ပြည်နယ် ၂၇ ခုအနက် အားလုံးနီးပါး တွင် လော့ဒေါင်း ပုံစံတစ်မျိုးမျိုးကို ချမှတ်ထား ဆဲဖြစ်ပါတယ်။
သေဆုံးသူတွေရဲ့ လေးပုံတပုံ ဟာ ဘရာဇီး ရဲ့ စီးပွားရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ဆိုင်ရာမြို့တော်ဖြစ်သော ဆော်ပေါ်လိုပြည်နယ်က ဖြစ်ပါတယ်။ ဆော်ပေါ်လို မြို့ဟာ လတ်တလောအချိန်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူး စက်ပျံ့နှံ့မှုအဆိုးရွားဆုံးဒေသ ဖြစ်နေပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး အစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သမ္မတနှင့် မကြာခဏ အချင်းများခဲ့တဲ့ ဆော်ပေါ်လို ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Joao Doria က ဘရာဇီးဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နှင့် ဘော်ဆွန်နာရိုဗိုင်းရပ်စ် နှစ်ခုစလုံးကို တိုက်ဖျက် နေရကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
A funeral worker wearing protection gear preparesacoffin to remove thebody of Raimundo Costa do Nascimento, 86, who died at home amid the new coronavirus pandemic in Sao Jorge, Manaus, Brazil, Thursday, April 30, 2020. Family members had to wait 10 hours for funerary services to come pick up his body. (AP Photo/Edmar Barros)
ဗိုင်းရပ်စ် နှစ်ခုကို တိုက်ဖျက်နေရတဲ့ ဘရာဇီး နိုင့်ငံအကြီးအကဲ ရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှု အလွဲများကြောင့် ကိုဗစ်ကို အရှုံးပေး လိုက်ရဆော်ပေါ်လို၊ ရီယိုဒီဂျနေရိုးနှင့် နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနှင့် အရှေ့မြောက်ပိုင်း တစ်ဝန်း ရှိ ပြည်နယ်အများအပြားရှိ ဆေးရုံများဟာ လူနာတွေ များလွန်းလို့ မနိုင်မနင်းဖြစ်ကာ ပြိုလဲ လုနီးနီး ဖြစ်နေ ခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရက ယာယီဆေးရုံတွေ အမြန်တည်ဆောက်ပေးနေပေ့မယ့် ထပ် တိုးလာ တဲ့ လူနာတွေကြောင့် အလျင်မမီ ဖြစ်နေရ ပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သည် သာမန်တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ် အပျော့စားဖြစ်သည်ဟု ခိုင်းနှိုင်းခဲ့တဲ့ သမ္မတ ဘော်ဆွန်နာရို က ကိုဗစ်အား ဟန့်တားရန်အတွက် ငှက်ဖျားကာကွယ်ဆေးများကို မျှော်လင့်ချက်ထား လျက် ရှိနေ ပါတယ် ။ ကိုဗစ်ကပ် စတင်ချိန်မှစ၍ ဘရာဇီးတွင် ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီး (၂) ဦး အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ယခုအချိန်တွင် အရေးကြီးတဲ့ ယင်းဝန်ကြီး ဌာနကို စစ်ဗိုလ်ချုပ်တဦးက ယာယီဦးဆောင် လျက် ရှိနေပါတယ်။
သမ္မတက ငှက်ဖျားဆေးများ ကို ကိုဗစ်ကုသရာမှာ အသုံးပြုဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့လို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး က နှုတ်ထွက်သွား ခဲ့တာဖြစ် ပါတယ် ။ ဘရာဇီးအစိုးရက ကိုဗစ်လူနာများ လက္ခဏာပြသည်နှင့်တပြိုင်နက် အဆိုပါ ငှက်ဖျားဆေးများကို အသုံးပြုရန် တိုက်တွန်း အကြံပြု ထားပါတယ်။
တရုတ်ကို တစ်ရစ်ချင်း ချည်နေတဲ့ အမေရိကန် နဲ့ မဟာမိတ်တို့ရဲ့ကိုယ်စားပြု ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ အာဆီယံ ၅ နိုင်ငံခရီး
အမေရိကန်စစ်တပ် အတွက် ဆန်းသစ်ခေတ်မီ တဲ့ အနာဂတ် – တိုက်ခိုက်ရေး ရဟတ်ယာဉ်
ကမ္ဘာ့ အင်အားကြီး ရေတပ်တွေ ကို ပုခုံးချင်း ယှဉ်ဖို့ ခြေလှမ်းတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ တရုပ် တို့ရဲ့ ပထမဆုံး လေယာဉ်တင်သင်္ဘောဘယ်လို ရလာ ခဲ့သလည်း
ကြောက်ဒူးတုန် ပြီလား ကင်ဂျုံအန် မောင်နှမတို့ – တောင်ကိုရီးယာ ဆန့်ကျင်စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေ ကင်ဂျုံအွန် ရပ်ဆိုင်းခိုင်း